Simbi rakanyorwa kiramba billet kusimudza kiramba
Simbi slab clamp billet inokwidza clamp Iyo tong michina yekutakura mabheti yakagadzirirwa neakafambira mberi ruzivo kubva kumba nekune dzimwe nyika pahwaro hwezviitiko zvedu zvekugadzira kwemakore mazhinji nekubatsira kwekusashandisa simba, hapana magetsi emagetsi anopindirana, akavimbika & akachengeteka mukushanda uye anochinjika. kuchinjika. Chokwadi chakaratidza kuti ichi chishandiso chekusimudza chinogona kutakura uye kudzikisa mabara esimbi zvakasununguka pasina kubatana kwevashandi vepasi, inova yakanaka lifti ...
Permanent Nokusimudza magnets a
Permanent remagineti anosimudza Iyo Super Magnet otomatiki Kusimudza Sucker chigadzirwa chepamusoro-tech chakagadzirwa zvichibva pasimba-remagetsi magineti zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya mukufambisa nekusimudza maitiro esimbi, machining, chakuvhuvhu, imba yekuchengetera, nezvimwewo Kubatana kwe block uye cylindrical magnetic conductive simbi zvinhu zvinogona kuvandudza zvakanyanya kugona kwekutakura uye kuturura uye kubata kweanoshanda. Tsanangudzo Model Rated vachisimudza vanokwanisa Dimensions (mm) Kurema makirogiramu ...
Cargo mutoro wekutakura trolley
Cargo mutoro wekutakura trolley Maindasitiri muchina chinotenderera madhiragi ane kuvimbika kwakanyanya, kusimba uye chengetedzo standard. Mberi dolly inouya neinotakura inotakura yakatsigirwa turntable ichibvumira kutungamira zvakasununguka pasina kuda kumira nekumisazve kutendeuka. Dhonza neruoko kana kunamatira kune forklift yekukweva. Inotenderera mitoro inorema zviri nyore kubva panongedzo A kusvika kunongedza B isina kuyedza kushoma. Iyo dolly system haizotsvedza kubva pasi pemutoro - kunyangwe iri pasi pekudhonza uye kukweva. Kureba pakati pemadhiri kumashure ndiko ...
Waya Rambo Chifuramabwe neakavhurika Spelter Socket
Vhura Rudzi Kukanda Socket Simbi Wire Tambo Chipfuramabwe cheMarine Kuchera pamwe neCustomized Services.
Kwakakurudzira Isu Type G416 Grooved Vhura Type Spelter Socket
Steel paakasimudza Plate Clamp
Chigadzirwa chigadzirwa: Simbi yekusimudza ndiro simbi Yakakwira Mhando Yekugadzira Simbi Vertical Plate Kusimudza Clamp Model Kushanda Mutoro Limit (Ton) Jaw Kuvhura (mm.) Kurema Imwe (kg.) LWK928-1 0.8 0-16 2.8 LWK928-2 1 0-22 3.6 LWK928-3 2 0-30 5.5 LWK928-4 3.2 0-40 10 LWK928-5 5 0-50 17 LWK928-6 8 0-60 26 LWK928-7 10 0-80 32 LWK928-8 12 25-90 48 LWK928- 9 16 60-125 80 Horizontal simbi vachisimudza Plate C ...
Shandisa pane chinongedzo cheni, kubatanidza neketani uye inoumbwa nein cheni sling.
Application: Muchena sandara webbing nezvipfuramabwe vari zvinowanzoshandiswa avhiyesheni, Aerospace, simba renyukireya pakagadzwa, uto kugadzira, chengarava vachidzikisa uye vachidzikisa, simba midziyo, muchina kugadzira, kemikari simbi, shipbuilding, chokufambisa uye dzimwe minda.
Kubatsira kwesilab billet clamp inoshanda zvakavimbika, kuchinjika uye zvakachengeteka. Kuvhura nekuvhara mashandiro akagadzirwa nesimbi yesimbi ine yakasimba simba inopfeka. Iyo slab billet clamp ine hupenyu hwakareba hwebasa. Zvinoenderana nemarongerwo ayo, slab billet clamp yakakamurwa kuve yakamisikidzwa kiramba uye chinogadziriswa kiramba (iyo H yakakwirira haigone kugadziridzwa). Iyo billet clamp inokodzera kusimudza akasiyana maratidziro uye akasiyana manhamba emabhiridha.
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya musimbi, michina yekugadzirisa muforoma, imba yekuchengetera uye imwe nzira yekusimudza.
Kushanda: Inokodzera shanduko, kuvaka ngarava uye yakakosha michina uye dzakasiyana nharaunda munzvimbo hombe yekusimudza zvakakosha zvinodiwa. Iko kushoma kwekutyora simba kwetambo tambo isina kubatana inguva nhanhatu dzemutoro unoshanda.